Copy of Guriga | georgedixonprimary
Ku soo dhawoow Dugsiga Hoose ee George Dixon
Ku soo dhawoow boggeena cusub! Qaybuhu wali waa ay socdaan dhismaha laakiin u fiirso meeshan sida aan rajeyneyno in ay si joogto ah u cusbooneysiiyaan oo ay ku daraan qaybo cusub!
Dugsiga Hoose ee George Dixon, waxaanu ku faraxsanahay in aan soo dhaweyno carruurta ka socda adduunka oo dhan. Dugsigeena firfircoon waxaa lagu yaqaanaa bulshadeena si aan u noqono dugsi diirran oo daryeel leh oo aan la shaqeyneyno qoysaska si loo abuuro sifo heer sare ah oo raaxo leh oo lagu dhisay dhiirigelinta barashada.
Waxaan mudnaanta koowaad siineynaa in aan helno caruureero caruureed, waalid taageero ah, guddi maamul oo wax ku ool ah iyo shaqaale adag oo shaqeynaya oo dadaalkooda ay kufilan yihiin dariiqa si loo arko ilmo kasta oo ku guuleystey guul iyo jawi dhiirigalin ah.
Carruurta iyo shaqaalaha ayaa si adag u shaqeeyay si ay u horumariyaan qiimaha dugsigeena, oo aan ugu yeerno 7C. Kuwani waxay hoos u dhigaan waxkasta oo aan ka sameyno George Dixon Primary; waxay go'aamiyaan sida aan ula socono waxbarashadayada oo aan ula macaamilno kuwa kale. Waxaan aaminsanahay inay dugsigeena ka dhigaan meel wanaagsan oo ay la wadaagaan Qiimaha Ingiriiska ee Dimuqraadiyadda, xorriyaadka shakhsi ahaaneed, dulqaadka, ixtiraamka iyo xeerka sharciga.
Waxaanu la leenahay mashruuca nabdoonaanta si loo barto farsamooyin cusub oo lagu xaliyo isku dhaca iyo in la abuuro bulsho dugsi oo dheeraad ah. Tani waa habka iskuulka oo dhan oo lagu xalliyo khilaafaadka taas oo ah 'dib u habeyn' dabiiciga ah - taas macnaheedu waa in shaqaalaha iyo carruurta labadaba ay leeyihiin siyaabo cusub oo lagu xaliyo dhibaatooyinka, dayactirka waxyeelada iyo dib u soo celinta xiriirada markay jabaan. Sida ugu weyn ee aan u sameyn doono arrintan waa marka wax qaldamaan; waxaanu waydiisan doonaa dhammaan dadka ku lugta leh inay isu yimaadaan, dhagaystaan saameynta dhibaatada dhinacyada oo dhan iyo inay wada shaqeeyaan si ay ula yimaadaan xalalka qaar.